हिजो बोलेका कुराको एक एक हिसाब हामी जनतालाई बुझाउछौं : इश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री – Janata Times
अन्तर्वार्तापत्रपत्रिकामूख्य समाचारविचार / ब्लग
हामी सरकारमा आएको दुई वर्ष अब फागुनमा पुग्छ । यो सरकार बन्ने कुरा केवल सरकार परिवर्तनको मात्र थिएन, प्रणालीमा परिवर्तनअन्तर्गत थियो । प्रणालीमा परिवर्तन किन भन्दा २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि हामी देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो भन्ने राजनीतिक घोषणा गर्यौं । त्यसको दस वर्षपछि संवैधानिक घोषणा गर्यौं । २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणापछि मुलुक नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्यो । २०७४ सालमा निर्वाचन भएपछि यो सरकार गठन हुने बाटो खुल्यो । स्थापित मानसिकताका आधारमा यो परिवर्तनलाई नबुझौँ भन्छु म । राजनीति र संवैधानिक परिवर्तनपछि बनेको सरकार हो यो । प्रणाली त परिवर्तन भयो, यसैअनरूप कार्यान्वयन गर्न भुइँमा खुट्टा टेकेर हिँड्नुपर्यो । त्यसका लागि विशेष कानुन, नीति र संरचना बन्नुपर्यो । जबसम्म यी बन्दैनन्, तबसम्म काम हुँदैन । कानुनको अभावमा उठान त भइरहेको हुन्छ तर बैठान हुन सक्दैन । त्यसैले हामी कानुन, नीति र संरचना बनाउनमा यस अवधिमा केन्द्रित भयौँ ।
भूकम्पका बेला पनि सेनाले राम्रो संयोजनको काम गर्यो । विकास निर्माणमा पनि संविधानको किटानी व्यवस्थाअनुसार नै सेनाले काम गरिरहेको छ । हामी संविधान, कानुनमा सेनाले गर्न सक्ने कामको व्यवस्था गरिदिने अनि सेनाले त्योअनुसार काम गर्दा किन प्रश्न ? हामीले बनाएको सैनिक ऐन २०७३ को किटानी व्यवस्थाअनुरूप नै सेना चल्दा मिलेन भन्नुमा सङ्गति मिल्दैन । मैले नेपाली सेनालाई भन्ने गरेको छु कि अहिलेको समयअनुसार ‘अपडेटेड’ भएर चल्नुपर्छ ‘आउटडेटेड’ हैन । सरकारले, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जे निर्णय गरेको छ, त्यहीअनुसार नेपाली सेना चलेको छ, संविधान, कानुन उल्लङ्घन हुनेगरी कुनै पनि काम गरेको छैन । यो म रक्षामन्त्रीको हैसियतले दावा गरेर भन्न सक्छु । रानीपोखरी ठेक्का लगाउन नसकेर सेनालाई गुहार्ने काम भएको थियो तर सुगम ठाउँमा हैन, विकट ठाउँमा काम देऊ भनेर सेनाले हात नहालेको हो । अरू ठाउँको अभ्यास हेर्न पनि जरुरी हुन्छ ।
नेपाली सेनासँग रहेको कल्याणकारी कोषको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ । त्यो पैसा बैङ्कमा राखेर व्याजमात्र लिने हो र ? रकमको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने बहस अहिले छ । यो रकम व्यापार गर्न दिने होइन । हामी सेनाले व्यापार गर्न हुँदैन भन्ने तर इन्धनको समस्या हुँदा सेनाकै पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करको खोज गर्ने गछौं । कपडा कारखाना सेनाले चलाओस् भन्छौँ, सेना यस्ता काममा राज्य संलग्न रहोस् भन्छ । अनि यस्ता काम गर्दाचाहिँ हेर–हेर सेनाले व्यापार गरेको ! भनी प्रश्न गर्छौं । यो कमजोर र नकारात्मक मानसिकता हो । वास्तवमा सेनाले संविधान, कानुन, निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्दै आएको छ । कुनै मन्त्रीले यसो गर उसो गर भन्दा गर्दैन । ऊ चेन अफ कमान्डमा छ । पैसा सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने छलफलको विषय अवश्य हो । अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ । सेनाले राष्ट्रको हितमा हुनेगरी नै काम गर्छ । खास–खास ठाउँमा पेट्रोल पम्प निर्माण, खानेपानी (मिनरल वाटर)मा लगानी गर्ने चर्चा पनि आइरहेको छ । सङ्कट परेका बेला त्यसले सहयोग पुग्छ होला । नेपाली सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्नु उचित होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नै काम गर्ने हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले नै २०६६ मा फास्ट ट्र्याकको काम सेनालाई दिएको हो, देऊ कि देऊ भनेर सेनाले लिएको होइन । पहिले डीपीआर बनाउने विषयमा ठूलै बहस भयो । संसद्ले नै भनेपछि सर्तसहित सेनाले स्वीकार गरेको हो । २०७४ वैशाखमा निर्णय भएको थियो । जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसको शिलान्यास गर्नुभयो । असारमा कार्यविधि बन्यो । साउन २६ गते विधिवत् रूपमा भौतिक योजना मन्त्रालयले औपचारिक रूपले जिम्मेवारी दियो । जिम्मा पाएपछि त सेनाले गर्नैपर्यो । पहिले एडीबीको प्रतिवेदनका आधारमा डीपीआर थियो, पछि फेरि सेनाले डीपीआर व्यवस्थित गर्यो । अहिले सोअनुसार काम भइरहेको छ । करिब ५० प्रतिशत लेभलिङको काम भइसकेको बुझिएको छ । अब टनेल, पुल (८७ वटा) को काम भइरहेको छ । साढे छ किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नुपर्नेछ । ग्लोबल टेन्डर गरेर नै त्यो काम अघि बढ्नेछ । सेनाले आफैँ गर्न सक्ने काम आफैँ गर्छ, नसक्ने कामलाई अरूलाई ठेक्का दिएर गर्न सक्ने कार्यविधि छ, त्यहीअनुसार सेनाले काम गरिरहेको छ । यसमा सेनाले अनियमितता गर्यो, ठग्यो, खायो भनेर सोच्नु हुँदैन । अनियमितता भएमा त कानुनअनुसार कारबाही भइहाल्छ नि । जस्तो ठाउँका ठाउँ १६७ जना कारबाहीमा पनि परे, अन्त पनि पर्छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित गर्यो तर सार्वजनिक गरिएको छैन किन ? नेपाली सेना परम्परागत संरचनामा छ, सुधारका लागि के काम भइरहेको छ ?
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालमा बनेको हो । यो निरन्तर अद्यावधिक हुने चीज हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट यो नीति अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको हो । मेरो नेतृत्वमा अद्यावधिक गर्ने टोली बनाएर चार महिना लगाएर अन्तिम रूप दिएका छौँ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट पास भएको छ । सरकारले पनि यसलाई पारित गरिसकेको छ । यो कुनै विधेयक होइन, नीतिमात्र हो । त्यसमा केही कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भएर बाहिर नआएको हो । सरकार त्यही नीतिबाट निर्देशित हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जस्तो छ, त्यस्तै विधेयक बन्छ । त्यसको खाका बनिसकेको छ । नयाँ विधेयक दर्ता सँगसँगै पुरानो विधेयक फिर्ता हुन्छ । २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेको थियो । अहिले तयार भएको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न बाँकी छ । यो विधेयक पारित भएसँग पुरानो नीति खारेज हुन्छ । यो सँगसँगै हुन्छ ।
न्द्वलाई विधिसम्मत रूपमा प्रकट हुन दिनुपर्छ, नदिए एक न एक दिन विस्फोट हुन्छ, विध्वंश गर्छ । यो दार्शनिक मान्यताको जगमा जबजलाई तत्कालीन एमालेले स्वीकार गरेको थियो । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि छ यसमा । दुई पार्टी एक हुँदा जनताको जनवाद अघि आएको छ । तर, सार यसमा पनि त्यही छ ।
सेना परिचालनको विषय खुब उठेको अर्को विषय हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ । सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ । अनुमोदन भएमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, यही हो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था । तर, त्यस्तो बेलामा परिषद्को बैठक बस्न नसकेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर, त्यसको निश्चित अवधिभित्र संसद्बाट अनुमोदन गराइसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था कसरी–कसरी राखियो भनी बुझ्दा भूकम्प गएका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बाहिर जानुभएको थियो । सेना परिचालन गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो । कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँदा यस्तो व्यवस्था गरिएको रहेछ ।
अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसविना कसरी मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्यो ? भन्ने खुब टिप्पणी भयो । अनि यसलाई उत्पात नै गरियो, अधिनायकवाद लाद्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । सङ्कटमोचनका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको हो । अन्तरनिहित कारण त्यही हो । तर, कतिले कुरा बुझेर पनि त्यो भनिरहेका छैनन् । अब नयाँ सुरक्षा नीतिअनुरूप हुनेगरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ, केही प्राविधिक कुरामात्र टुङ्ग्याउन बाँकी छ । सुरक्षा परिषद्लाई नयाँ ढङ्गले प्रभावकारी रूपमा बढाउने कुरा विधेयकमा छ ।
यसमा दुई÷तीनवटा कुरा छ । समयमै जस्ताको तस्तै जनतालाई सुसूचित गर्न नसकेर केही समस्या उत्पन्न भएका होलान् । निर्णय गरिसकेपछि प्रभावकारी ढङ्गले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन नसक्दा पनि होला । राम्रो मालसामानलाई राम्रो भन्न नजान्दा यस्तो समस्या आउँछ । राम्रा कुराको सञ्चारमाध्यमबाट जस्ताको तस्तै बाहिर आउनुपर्छ । दायाँबायाँ गरेर सूचना प्रवाह गरिदिनुभएन । गरेको कामलाई प्याकेजिङ हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।
अर्को धेरैलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको पचेको छैन । देश–विदेशमा यसमा अनेक टिप्पणी छ । दुनियाँमा नभएका बेला कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा कसरी ? प्रश्न छ । दलीय प्रणालीमा दल निर्णायक हुन्छ । तर, अहिले हाम्रो ठूला घरको ठूलै चालाजस्तो भएको छ । सबै कमजोरीलाई अन्त्य गर्न त सकिँदैन तर न्यून गर्न सकिन्छ । आउने दिनमा यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । अनि लामो समयको आदत र अभ्यास बलशाली हुन्छ । एकातिर अभ्यास र आदतले बनेको पाटो छ । अर्कोतिर संवैधानिक व्यवस्था छ । यो दुईको बीचमा तानातान छ अहिले । लामो समयदेखि अभ्यास र आदतमा हामी छौँ । हिजो एउटा सरकार थियो । अहिले तीन तहका सरकार र संवैधानिक रूपमा किटानी जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गर्दा नमिलेकोजस्तो देखिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने हाम्रो आदत र अभ्यास भएपछि यो स्वाभाविक लाग्दै जान्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदा दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था गर्यौं । दुवै अध्यक्ष कार्यकारी नै हुनुहुन्छ । तर धेरै टिप्पणी मिडियामा देखियो, त्यस विषय बैठकले टुङ्गो लगाइसक्यो । जहाँसम्म जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा छ, यसमा तीनवटा पक्ष छन् । एउटा, कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुमा लिएको अग्रजहरूको उन्नत निस्कर्ष छ । २००६ वैशाख १० गते निस्केको पहिलो पर्चामा भएको विचार जबजमा छ । हाम्रा अग्रजले बोकेको विचारको उन्नत निस्कर्ष हो यो । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट निस्केको सकारात्मक निचोड हो– जबज । तेस्रो दर्शन र सिद्धान्तद्वारा निर्देशित छ यो । द्वन्द्वलाई विधिसम्मत रूपमा प्रकट हुन दिनुपर्छ, नदिए एक न एक दिन विस्फोट हुन्छ, विध्वंश गर्छ । यो दार्शनिक मान्यताको जगमा जबजलाई तत्कालीन एमालेले स्वीकार गरेको थियो । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि छ यसमा । दुई पार्टी एक हुँदा जनताको जनवाद अघि आएको छ । तर, सार यसमा पनि त्यही छ । यसमा वर्गीय पक्षधरता छ । लय मिलेर राखेको होइन यो नाम । बहुदलीय भनेको हामी अधिनायकवादी होइनौँ भन्ने वकालत हो, जनवाद भनेको नयाँ किसिमको लोकतन्त्र हो । यो सूत्र बोकेको विषय हो– जबज । जबज जड सिद्धान्त होइन ।
उखान छ नि “बाढी आएका बेला खोला तर्दा खुट्टाको औँलाले ढुङ्गा छाम्दैछाम्दै तर्नू” । हामी त्यहीअनुसार निर्देशित हुनुपर्छ । यो अहिलेको यथार्थ हो । बनिबनाउ चीज केही छैन । हामी यसमा कति योग्यता र सुझबुझ देखाउँछौँ, त्यसमा हाम्रो सफलता निर्भर गर्छ । हामी आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छौं । जनताले हिजो बोलेका कुराको हिसाब गर्छन्, त्यो हिसाब हामीले बुझाउनैपर्छ । कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । राम्रो काम पनि भएको छ । कहीँ–कहीँ बेतिथि र अनियमितता भएको पनि सुनिएको छ । पार्टी एकताको काम अझै टुङ्गिएको छैन । यो काम सकेर सरकारको कामलाई पनि गति दिँदै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले आफूलाई तयार गर्दै लगेका छौँ । (गोरखापत्र)
Related tags : इश्वर पोखरेलउपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल
हिमचिमले पुर्यायो जन्मकैदको सजायसम्म …………….
विश्वकै कान्छी प्रधानमन्त्रीले सुनाइन अनौठो कार्ययोजना
कोरोना रोक्न नेकपाले जारी गर्यो बिशेष परिपत्र : यस्तो छ नेता-कार्यकर्ताले गर्नैपर्ने काम (पुर्णपाठसहित)
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर र राजपाका नेताविच मध्यरातसम्म भेटवार्ता
आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएका छन, सुधारका संकेत देखिएका छन : डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री